Online Education – YANGON STYLE
ယခုလို အိမ်မှာနေချိန်များနေသည့် ကာလတွေမှာ အချိန်တွေကိုအလဟသမဖြစ်အောင် Online Leaning လုပ်လို့ရသည့် Website ပေါင်းများစွာထဲက လက်လှမ်းမှီသလောက် မျှဝေပေးသွားပါတယ်။ IT ခေတ်ကြီးဖြစ်သည့်အတွက် အရင်ကလို တစ်ခုခုလေ့လာမယ်ဆို များစွာတော့ အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ ကုန်ဆုံးမှုကိုများစွာ လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ Online Education ဆိုတာ သုံးတတ်ရင်သုံးသလို အကျိုးများစွာ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးများရဲ့ သင်ကြားမှုများကိုလည်း အိမ်မှာနေရင်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Online Learning လေ့လာချင်သော်လည်း ဘယ်လိုစရမှန်း မသိသူတွေအတွက် လေ့လာကြည့်လို့ ရအောင် Website Link လေးတွေပါ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
1. AgriLife Learn
Child Care, Business And Finance, Science အစရှိတဲ့ဘာသာရပ်တော်တော်များများကို Free Course အနေနဲ့တွေ့ရမှာပါ။ဒီ site လေးကတော့ Texas (USA) ကဖြစ်ပြီး Free Certificate လည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။
Website : https://agarn.tamu.edu/
စီးပွားရေး၊ နည်းပညာ၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ဘာသာစကားတွေ ပါဝင်တာ ဖြစ်လို့ ဘာသာစကားနဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေ၊ media အကြောင်းတွေ၊ Journalism and public relations, Health and fitness, Business and studies, Computer programming and networking, Business management and entrepreneurship, Food safety, Nursing and patient care, Customer service စတဲ့ အကြောင်းအရာ မျိုးစုံကို Certificate, Diploma ကြိုက်ရာရွေးပြီး တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
Website : https://alison.com/
3. Code Cademy
Website : https://www.codecademy.com/
Coursera ကတော့ အများကြီး ပြောစရာမလိုအောင် နာမည်ကြီးပြီးသား Online Learning Platform ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ် အားလုံးက Free မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ အခကြေးငွေပေးရတဲ့ ဘာသာရပ်လေးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
Website : https://www.coursera.org/
Edx ကိုတော့ Harvard University နဲ့ Massachusetts Institute of Technology (MIT) တို့ကနေ ပူးပေါင်း တည်ထောင် ထားတာပါ။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ပို့ချချက်၊ ဆွေးနွေးမှုတွေကို Full Courses အနေနဲ့ လေ့လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းပြီးမြောက်လို့ Certificate ထုတ်ချင်ရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏတစ်ခုပေးရနိုင်ပါတယ်။
Website : https://www.edx.org/
Facebook Blueprint မှာ Facebook ကို အသုံးပြုပြီး ဘယ်လို ဝင်ငွေရှာမလဲ။ Instragram ကို အသုံးပြုပြီး ဝင်ငွေဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာကို သင်ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Certificate လိုချင်ရင်တော့ ပိုက်ဆံအနည်းငယ်ကုန်ကျပေမယ့် သင်ခန်းစာတွေအားလုံးက အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
Website : https://www.facebook.com/business/learn/
Java, HTML5, CSS3, Database အစရှိသဖြင့် အမျိုးအစားတွေခွဲပြီးလေ့လာနိုင်သလို Certificate ကိုလည်း အဆင့်ဆင့်ပေးပါတယ်။
Website : https://www.freecodecamp.org/
Future Learn မှာ Data Science နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Course တွေထက် Literature, Law, Politics နဲ့ Language Skills တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Course တွေပိုစုံလင်ပါတယ်။ Future Learn နဲ့ British Council ပူးပေါင်းပြီးတော့လည်း IELTS Preparation Free Online Course တွေအမြဲဖွင့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
Website : https://www.futurelearn.com/
Google Skillshop မှာ Google နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Tool တွေကို ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်နိုင်ပြီး Certificated ပါ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Google AD၊ Google Marketing Platform အစရှိတဲ့ Marketing နဲ့ဆိုင်တဲ့ Tool တွေကို သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
Website : https://skillshop.withgoogle.com/
Khan Academy ရဲ့ Course တြေကို video ပုံစံနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး Youtube မွာလည်းအလြယ်တကူရွာနိုင်ပါတယ်။ သင်ခန်းစာတွေ အကုန်လုံးက video ကိုအခြေခံထားတာချည်းမို့ video ကနေ သင်ယူတာထက် စာဖတ်တာကို ပိုအားသန်သူ ဆိုရင်တော့ သိပ်အဆင်မပြေပါဘူး။
11. Quality Mx(six sigma white Belt)
စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် Level အလိုက် Online Based Test တွေဝင်ဖြေနိုင်ပြီး6sigma Level ရောက်တဲ့အထိ တိုးတက်အောင်သင်ယူလို့ရပါတယ်။ Certificate ကလည်း Free ဖြစ်ပါတယ်။
Website : https://www.sixsigmaonline.org/six-sigma-white-belt-certification/
Skillshare ကတော့ Design ပိုင်းကို အထူးပြုနေတဲ့သူတွေ သိသင့်တဲ့ Website ဖြစ်ပါတယ်။ Illustration ပိုင်း စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အချိန်ပေးရတာတန်တဲ့ Website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Premium နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံသွင်းရပေမယ့် Free သုံးခွင့်လည်း ရတဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Website : https://www.skillshare.com/login/
Data analytics, Machine learning, Software engineering, Web development စသည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အတန်းတွေအပြင် Virtual Reality အထိတောင် သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
Website : https://www.udacity.com/
Free Course နဲ့ Paid Course ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။ Tech ၊ Business နဲ့ Marketing Field အတွက် Course တွေများပါတယ်။
Online Course တွေကို သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင့်မိတ်ဆွေများကိုပါ မျှဝေပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။